‘Iqabane langempela alithengwa ngemali’ | IOL Isolezwe
‘Iqabane langempela alithengwa ngemali’
Isolezwe / 3 December 2012, 10:44am /
KUVUKE umunyu ezihlotsheni ezashonelwa odlameni lwangeminyaka edlule KwaZulu-Natal ngesikhathi kumbulwa itshe lesikhumbuzo samalungu e-ANC ababhubha. Lapha uMengameli Jacob Zuma noNdunankulu wakulesi sifundazwe, uDkt Zweli Mkhize, bebencokolisa u- Aphiwe Mbatha (3) benoNkk Ngitheni Mathonsi abayizihlobo zika Thulisile Mbatha obeyingxenye yabebekhunjulwa
Irally ye ANC ebiyenzelwe e Mgababa emuva kokuvulwa kwesikhumbuzo sethuna sabafa odlameni.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
UMENGAMELI Jacob Zuma uxwayise ngokuthi i-ANC akusilona iqembu lebhola lapho kuhlale kwenziwa khona izinguquko ngisho isidingo singekho.
Ekhuluma emcimbini wokwembulwa kwetshe elinamagama amaqhawe omzabalazo aseMgababa izolo, uZuma uthe yize abantu ku-ANC benelungelo lokuphakamisa ukuthi bafuna ukuholwa ngubani ngenxa yentando yeningi kodwa kumele bakhumbule ukuthi ayisiyo i-Orlando Pirates noma i-Kaizer Chiefs lapho kushintshwa khona abadlali kalula.
UZuma ukhipha lesi sexwayiso nje, sekujwayelekile ukuthi kubonakale abalandeli be-ANC benza izimpawu zokufuna ushintsho ezenziwa abalandeli bebhola ezinkundleni zemidlalo uma sebefuna ukuthi abaqeqeshi babo bashintshe umdlali abangamboni kahle.
Ngempelasonto ezinye izifundazwe azikwazanga ukukhetha abantu abafuna bahole i-ANC emuva kwengqungquthela yaseMangaung ngenxa yombango ngaphakathi kubalandeli.
Uphinde wanxusa izithunywa ezizoya engqungqutheleni yokukhetha ubuholi eMangaung ukuba zenze lokho ezikuthunyiwe, futhi zifike zilalele nezinye ezithunywe okuhlukile kokwazo, zizitshele ukuthi iyiphi indlela okumele ziyithathe.
Uthe bayazi ukuthi sekukhona asebefakwe imali emaphaketheni, waqhuba ngokuthi iqabane langempela alithengwa ngemali.
UZuma uthe ingqungquthela yaseMangaung ibaluleke kakhulu ngoba izobe ibuka igxathu eselithathiwe kusuka engqungqutheleni yasePolokwane, iphinde ibheke ukuthi umbutho usebenze kanjani.
Uthe okunye abazokubheka ukuthi umbutho awukho yini esigabeni sezimpambano mgwaqo.
“Kuyaziwa ukuthi awukho umbutho ongenazo izinselelo obhekene nazo, kodwa isiphiwo se-ANC ukuthi noma yini ehlangabezana nayo noma ngabe inzima kangakanani ayiduki,” usho kanje.
UZuma uphinde wexwayisa ngokuthi kumele leli lizwe liyiphathise okwezikhali zamaNtungwa inkululeko ngoba kukhona abayifela.
“Yingakho namhlanje sihlangene la ukuzokhumbula labo abashona ngesikhathi sodlame belwela umzabalazo,” usho kanje.
Uthe bafuna ukuthi imindeni yabashona ibone ukuthi i-ANC ayikhohliwe ibona.
UNdunankulu waKwaZulu-Natal uDkt Zweli Mkhize unxuse imindeni nezihlobo yabebekhunjulwa ukuthi noma kubuhlungu kodwa bakudlulise okwenzeka.
Omunye wale mindeni uNkk Ngitheni Mathonsi uhlulekile ukuzibamba wakhihla isililo ngesikhathi ebona igama lengane yakhe uNksz Thulisile Mbatha ohlwini lamagama abhalwe kuleli litshe.
UNkk Mathonsi uthe kuvuka amanxeba amadala uma ebona igama lengane yakhe.